यो हो कहिल्यै जमिन नटेक्ने चरा जो २६ बर्ष बाँच्छ ! कसरी ? जान्नुस – Online Khabar 24
परेवाजस्तै देखिने यो सुन्दर चरा कति राम्रो छ। हलुका हरियो—पहेँलो रंगको हुने भएकाले यसलाई ‘हरियो चरा’ तथा अंग्रेजीमा ‘ग्रीन पिजन’ भनिन्छ।
नेपालमा पनि पाइने यो चरा भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा कम्बोडिया र चीनमा पनि देख्न सकिन्छ। यो ट्रेरन फेओनीकोप्टेरा प्रजातिको चरा हो। दुर्लभ प्रजातिमा सूचीकृत यसको मासु नरम हुन्छ। त्यसैले यसको शिकार धेरै हुने गरेको छ।
यसको आवाज विस्तारै सिट्ठी बजाउँदा निस्किएको जस्तै मधुर सुनिन्छ। कहिलै पनि यसले जमिनमा टेक्दैन। यदि कुनै बा’ध्यात्मक कारणले जमिनमा टेक्नुपर्ने भएमा आफ्नो खुट्टामा एउटा काठको टु’क्रा वा रुखका साना हाँगाको टु’क्रालाई चेपेर मात्रै भुइँमा आउँछ।
यो पूर्णतः शाकाहारी चरा हो। यसले फलफूल तथा टुसा उम्रिएका बिउहरू खान्छ। पाकेको फल खान पाउँदा असाध्यै खुसी हुन्छ। त्यस्तो फल भेट्यो भने खुसी भएर विभिन्न कला देखाउँदै खान्छ।
यो चरा लजालु स्वभावको हुन्छ। मानिसलाई देख्यो भने लजाएर लुक्न खोज्छ। यदि लुक्न सकेन भने पनि आफ्नो चुच्चो लुकाउन खोज्छ। यसले आफ्नो जीवनकालमा एउटा मात्रै साथी बनाउँछ। र, त्यसैसँग जीवन कटाउँछ।
यो सामाजिक चरा हो। समूहमा बस्न रुचाउने यिनीहरूको हुल ५ देखि १० वटाको हुन्छ। यिनीहरू प्रायः समूहमै उड्छन्। यिनीहरूको प्रज नन समय चैत महिनादेखि जेठसम्म हुन्छ। एकपटकमा यसले एक वा दुईवटा अन्डा दिन्छ। अन्डाको भालेपोथी दुवैले स्याहार गर्छन्। यो खबर ताजा खबर बाट साभार गरियको हो ।
Prevयिनै हुन् हिजो बिहान मृ’त्यु भएका २२ वर्षका वासु बस्नेत, मोटरसाइकललाई आईरहेका उनलाई अचानक ….
nextपिकनिक खान गएका मेयरका छोराको पिकनिक स्थलमै मृ’त्यु !